Ergaawwaan sagalee sobaa adda baasuuf yaaliin Hantuutarratti hojjetame firii gaari galmeesse – Fana Broadcasting Corporate
Ergaawwaan sagalee sobaa adda baasuuf yaaliin Hantuutarratti hojjetame firii gaari galmeesse
Finfinnee, Hagayya 6,2011 (FBC) – Eergaawwaan sagalee sobaa adda baasuuf yaaliin Hantuuta irratti hojjetame firii gaarii galmeessuun isa himame.
Miidiyaalee hawaasa ka’umsa godhachuun oduuwwaan sobaa faca’an ( barreeffamaan, suuraa fi sagaleen) yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan dhufanii fi yaaddoo guddaa ta’a dhufeera.
Kanaaf furmaata ni ta’a kan jedhan qorannoon qorattoota Yuunvaarsiitii Oorgaan furmaata haaraa fi adda ta’e qabate ba’eera.
Hirmaattota qorannicha keessa tokko kan ta’e Yoonataan Saandarsi akka ibsetti Hantuutota kutaa tokko keessa kan jira yaalii sagalee sobaa yuutubii irratti gad-dhiifame akka adda baasniif taasifameen firii ajaa’ibsiisa ta’etu galmaa’e jedhaniiru.
Kaayyoon inni guddaan argannoo haara kanaa Hantuutoonni gocha kana akkamiin raawwachuu akka danda’an beekuuf kallattiin kompwuutera irratti hojjechuu gara dandeesisuuti jijjiruuf carra kan kennu ta’uusaati jedhameera.